Safal Khabar - सूक्ष्म पोषण तत्त्वले भरिपूर्ण स्वस्थकर खाना जताततै
सूक्ष्म पोषण तत्त्वले भरिपूर्ण स्वस्थकर खाना जताततै
सोमबार, २८ पुष २०७६, १४ : ००
माघे सक्रान्तिमा हामी कहाँ घिउ, चाकु, तरूल, तिलको लड्डु र खिचडी खाने चलन छ। यो चलन अहिले होइन, परापूर्वकालदेखि नै चलेको हो । यसलाई हामी बुझेर वा नबुझेर निरन्तरता दिइरहेका छौँ ।
अहिलेकाे दृष्टिले हेर्दा त्यति बेला हाम्रा पूर्वजहरूलाई वैज्ञानिक महत्त्वबारेमा ज्ञान थिएन तर स्वास्थ्यलाई फाइदा पुर्याउँछ भन्ने साेचले नै यस्ता खानेकुरा खान शुरु गरेका हाेलान्।
माघे संक्रान्ति अर्थात् माघीमा मासको दाल र चामलको खिचडी बनाएर त्यसमा घिउ हालेर खाने चलनले हाम्रो संस्कृतिलाई जीवित त राख्छ नै, तिनले हाम्रो स्वास्थ्यमा पनि एकदमै राम्रो प्रभाव पार्छ।
‘मोलासेस’ पौष्टिक खाना हो र यसमा पर्याप्त मात्रामा क्याल्सियम र लौह तत्त्व पाइन्छ भन्ने कुरा मैले अमेरिका जाँदा थाहा पाएँ । लौ त्यो वस्तु किनेर नेपालमा पनि लैजानुपर्‍यो भनेर एक परिचितलाई भनेँ । मोलासेस उनकै घरमा रहेछ । खाँदा थाहा भयो, यो त नेपालमा सजिलै पाइने ‘चाकु पो रहेछ । यसमा भएको पौष्टिकताका कारण नै माघे संक्रान्तिमा खाने चलन चलाएका रहेछन्, पुर्खाहरूले । सहरबजारका हाम्रा अभिभावकलाई ‘चाकु बालबालिकालाई दिने गर्नू’ भन्दा ‘त्यस्तो जाबो चाकुले पनि बालबालिकालाई के फाइदा गर्ला र’ पो भन्ने हुन् कि ?
यस्ता जानकारी कृषि मन्त्रालयले अनुसन्धान गरेर लेखिएको पुस्तिकामा पर्याप्त मात्रामा छन्, तर यस्ता विषयमा छलफल गरिएको पाइँदैन।
कुनै दिन विदेशी अनुसन्धानकर्ताले यसरी घिउ, चाकु, खिचडी, तरुलमा पर्याप्त मात्रामा सूक्ष्म पौष्टिक तत्त्व हुन्छ भनेर अंग्रेजी वा जर्मन, भाषामा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे भने सायद हाम्रो युवा जमातले त्यस्ता कुरा बोहतामा खान गर्व गर्नेछन्।
विभिन्न जातजातिका आआफ्नै चाडपर्वमा आफ्नै विशेष परिकार खाइन्छ। ती सबै स्वस्थकर छन्। नयाँ वर्षको सुरुबाट अन्तिमसम्म प्रत्येक महिना कुनै न कुनै समुदायले कुनै न कुनै पर्व मनाइरहेका हुन्छन्। यस्ता पर्वहरूमा खाने परिकारको विश्लेषण गरी स्वास्थ्यमा पर्ने सकारात्मक असरबारे उल्लेख गर्ने र खान उत्प्रेरणा दिने हो भने बाहिरबाट ल्याइने वस्तुहरू विस्थापित गर्न सकिन्थ्यो।
अर्थात् सूक्ष्म पोषण तत्त्वले भरिपूर्ण स्वस्थकर खाना जताततै छ, प्रयोग गर्नमात्र सिक्नुपर्छ। संस्कृतिसँग जोडिएर आउने यस्ता खानेकुरा चाडबाडमा मात्र हाेइन माैसमअनुसारप्रत्येक दिन खाने बानी बसाल्न जरुरी छ। यसै दिनदेखि पुनः घरआँगनमै पाइने स्वस्थकर खाना खाने बानी सुरु गर्ने कि!
#सूक्ष्म पोषण तत्त्व #स्वस्थकर खाना